Shabakad ka Ganacsan jirtay Carruurta oo Muqdisho lagu qabtay - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Shabakad ka Ganacsan jirtay Carruurta oo Muqdisho lagu qabtay
Shabakad ka Ganacsan jirtay Carruurta oo Muqdisho lagu qabtay
Taliska Ciidanka Booliska Soomaaliyeed ayaa shaaciyay in Ciidamada Booliska ay soo qabteen Shabakad ku howlaneed ka Ganacsiga Carruurta taas oo in mudo ah ay ku raadjoogeen Ciidamada Amniga.
Taliye kuxigeenka Ciidanka Booliska Soomaaliya Zakiya Xuseen Axmed ayaa sheegtay in soo qabashada Shabakadaas ay ku guuleysteen Ciidamada Booliska gaar ahaan Hoggaanka Dembi Baarista ee CID,isla markaana lagu soo qabtay 11 eedeysaniyaal oo 8 ka mid ah ay yihiin Haween.
“Ciidanka Boliiska gaar ahaan Hoggaanka Dembi Baarista ee CID ayaa soo qabtay shabakad ka ganacsata caruurta taasoo la daba joogay muddo hal bil waxaana howlgalkaas lagu soo qabtay 11 eedeysanayaal oo 8 ay yihiin haween.
Sidoo kale Taliye Zakiya ayaa waxaa ay hadalkeeda intaasi ku dartay in Ciidamadu ay soo badbaadiyeen 11 Carruur ah oo ay Shabakada doonayeen inay iibsadaan,hayeeshee Ciidamada Booliska Soomaaliya ay la sugayaan waalidoontooda si ay ugu wareejiyaan.
Taliye Zakiya ma sheegin Magacyada dadka lasoo qabtay,xilliga uu dhacay howlgalka lagu soo qabtay iyo goobta laga soo qabtay,hayeeshee ay sheegtay in Boolisku uu dib ka faah faahin doono.
Previous articleSAWIRO:-Axmed Qoor Qoor oo ku dhawaaqaya musharaxnimada Madaxweynaha Galmudug
Next articleSAWIRO:-RW Khayre oo la kulmay wafdi socday QM & Bangiga Adduunka